China Soft PVC Coasters orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Ampiasao ny Soft PVC Coasters hiarovana ny latabatra sy ny birao ary ny kaopy. Izany dia mahatonga ny fiainanao ho lafo vidy sy matsiro kokoa. Matetika ireo mpitaingin-tsoavaly dia ampiasaina amin'ny bara, Sakafo, fianakaviana ary fety. Izahay dia manao safidy Coasters amin'ny alàlan'ny Soft PVC, silicone, Metal, hazo na taratasy. Ny Soft PVC Coasters dia ...
Ampiasao ny Soft PVC Coasters hiarovana ny latabatra sy ny birao ary ny kaopy. Izany dia mahatonga ny fiainanao ho lafo vidy sy matsiro kokoa. Matetika ireo mpitaingin-tsoavaly dia ampiasaina amin'ny bara, Sakafo, fianakaviana ary fety. Izahay dia manao safidy Coasters amin'ny alàlan'ny Soft PVC, silicone, Metal, hazo na taratasy. Ny Soft PVC Coasters no malaza indrindra noho ny toetra manohitra ny rano. Raha mitazona kaopy, vera, na mug misy ranoka, ny Soft PVC Coasters dia afaka misoroka ny lena ary tapaka vetivety. Miaraka amin'ny fitaovana malefaka malefaka PVC, ny Soft PVC Coasters dia tsy ho tapaka raha sendra milatsaka avy eny ambony latabatra na latabatra ny morontsiraka. Ny Coasters PVC malefaka dia mety hametraka ireo logo maroloko eo anoloana na eo an-damosina, miaraka amina embossed, debossed, loko feno, vita pirinty na vita sokitra dingana teknika. Ny morontsiraka PVC malefaka dia mety ho endrika tokana, singa 2, singa 3 na habetsaky ny isa napetraka ho an'ny fonosana.
Ny morontsiraka PVC malefaka dia mora vidy miaraka amin'ny kalitao avo, loko maro loko ary famolavolana mazava, tsara ho an'ny fampiroboroboana na fahatsiarovana hitazomana mandritra ny fotoana maharitra. Ny endrika mahazatra an'ny Soft PVC Coasters dia boribory na toradroa, manodidina ny 80 ~ 100 mm, fa ny endrika sy ny habeny angatahinao dia misy foana miaraka amina vola kely napetraka. Ny Soft PVC Coasters ataontsika dia vita amin'ny alàlan'ny fitaovana malefaka sy tontolo iainana Soft PVC, azo omena amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny vidiny mirary sy ny kalitao koa.
Antony: Die Struck, 2D na 3D, lafiny tokana na roa
Famaranana: Ny karazan-endriny rehetra, ny logo dia azo atao pirinty, voasokitra, voasokitra tamin'ny laser sns
Safidy fampiraisana mahazatra: Tsy misy miraikitra na namboarina
Teo aloha: Winders Cable Cable Winders
Manaraka: Tapakila malemy PVC
Fiboky lakile vita amin'ny hoditra miaraka amin'ireo marika amin'ny vy
Nasiana tombo-kase tsy misy gadona keychains
Vola vita amin'ny fitaratra na vola madinika porofon'ny Mint
Vata vita amin'ny takelaka vita amin'ny tinitra